FOCUS L vaAsheri is a China famous manufacturer of industrial laser equipment. Since 2008, Focus Laser founder involed into the development and production of various types of laser equipments. We only focus on lasers, so our brand became FOCUSLASER.
zvigadzirwa Our zvinosanganisira marudzi makuru matatu mishonga ndivo internet Laser rokuisa chiratidzo muchina, CO2 Laser kupenda muchina uye UV Laser rokuisa chiratidzo muchina. Zvichienderana yedu Laser michina isu atova 3D internet Laser achiita zvokutemera muchina (Deep achiita zvokutemera machine), Dynamic UV Laser achiita zvokutemera muchina, Dynamic CO2 Laser engaving muchina, kubhururuka Laser kupenda muchina, internet Laser nokuveza muchina, Laser nomoto muchina uye zvichingodaro.
Vanopfuura 20 akatevedzana. Munhu zvichienderana zvigadzirwa nerubatsiro kupa vatengi ane chinokosha zvinobatsira. Nokuda mukuru risanyatsobuda edu uye yakavimbika chaitwa, vari zvinowanzoshandiswa zvemagetsi, Hardware, muenzaniso-kugadzira, zvipfeko, shangu, kushambadza, kudhinda uye kavha, chitoyi-kugadzira, uyewo mamwe maindasitiri.
To nechokwadi unhu uye kutsiga muchina, FOCUS Laser vachishandisa zvemberi kugadzirwa uye nekuongororwa zvokushandisa, kusanganisira lasers mita iyo yabva USA, CNC kukuya michina, kushanda pakuvheneka girazi, AC shanduka voltage simba emulator wakatsiga, kukoshesa maitiro.
Uye tinoshandisa imwe thermostat pedengu kamuri, 3D kuyera mudziyo, Laser dynamometers, digitaalinen zambuko, uye yemhando midziyo kuongorora unhu uye mabasa Laser midziyo yedu maindasitiri mumwe kugadzirwa danho kuitira unhu hwedu muchina uye irambe unongotaura.
FOCUSLASER kunopa kutengeka, yepamusoro muchina. With zvakanakira China, vabatsirwe zvizere tichitarisa yepamusoro uye mutengo, zvokuvakisa pamusoro kuurongwa kubva kuGermany uye United States, Japan, Taiwan uye assemblying uye mukugadzira mu China. FOCUSLASER vane yakanakisisa romugove-chain-maitiro zvikamu uye zvinoriumba, uye nhoroondo yakasimba rakanaka uye utsanzi, kuratidza kuti edu-makore 10 chokupika muchina.
FOCUSLASER inobatanidza tarenda nyanzvi uye zvigadzirwa zvemazuva ano, ane zvikuru vanokwanisa vashandi. Kubva-software kukura kusvika Hardware design, hurongwa kuvhenekwa, hwokugadzira mabasa akapera ne nyanzvi uye michina vashandi.
FOCUSLASER angosimuka 23 Hardware uye Software patents pamatunhu Tech mumunda. Tine nesimba R & D izwi uye ruzivo azere Laser munda uye isu tiri "Hi-Tech Enterprises" mu China.
Focus Laser kwakaita nzvimbo rinopa yakawanda mikana kuderedza mari, nokudaro nokuderedza mitengo edu. Dzimbahwe FOCUSLASER iri muna Guangzhou ainziwo Canton vanenge 120? Km (75 mi) kuchamhembe-kuchamhembe kwakadziva kumadokero Hong Kong uye 145? Km (90 mi) kuchamhembe Macau, Guangzhou ine nhoroondo pamusoro 2,200 makore uye aiva chikuru Terminus pakati nepagungwa Silk Road uye anoramba rive guru chiteshi uye zvokufambisa nomusimboti nhasi, uyewo rimwe remaguta matatu China guru. Apo tine zvakanakisisa zvigadzirwa enzanirana hurongwa inogona nyore akatanga zvemberi rwokugadzira uye kugadzirwa midziyo, matarenda, uye kushandisa dzakasiyana-siyana nepagungwa uye mhepo chokufambisa, tinokwanisa kupa yepamusoro Laser midziyo pamwe inokwanisika mutengo.
Quality chigadzirwa kuita uye mukurumbira wakanaka, FOCUSLASER zvigadzirwa havasi chete kubudirira ikatengesa muna China, asi vave aivigirwa kunyika dzinopfuura 90 uye kumatunhu munyika, kusanganisira: Germany, USA, Italy, Russia, Japan, South Korea, Turkey, Brazil, India, United Arab Emirates, Saudi Arabia uye dzimwe nyika, zvigadzirwa inozviisa imwe welcome guru uye rumbidzo. Taigara akaonga vatengi 'kuvimba uye kutsigira FOCUSLASER.
Kupa zvakanakisisa michina yakanaka mutengo, uye inopa kugutsikana pashure-okutengesa kushandira mutengi.
Kuti uwane mashoko pamusoro yedu Laser michina, ndapota usazeza nesu